Dubihii ku dhacay Dugsigii Maxamuud Axmed Cali!
Qoomiyada dagta geeska Afrika ee soomaalida loo yaqaan waxay waligood rumaysnaayeen in ay xaq tahay dilka ragga xooga leh, kolkii laba beelood oo iyaga ka mid ah ay colaadi ka dhex ooganto, laakiin waxay ka maagi jireen in ay maxaabiista, maatada iyo dadkii gala meela lagu cibaadeysto sida masaajida laayaan. Waxaa kale oo aan la daba gali jirin qofkii magansada goobaha waxbarashada sida dugsiyada, xarumaha wadaadda, guryaha boqorada iyo kuwa isku magaacaaba awliyooyinka. Kufsiga iyo afduubkuna waxuu ahaa arin aan marnaba loo dul qaadan xagga soomaalida sida adduunka kale.
Dhaqankaas ummada afka diinta haysataa ku soo dhaqmayeen qarniyaal badan ayaa wax laga badaley waayihii danbe.
In la xasuuqo rag badan oo qabiil kalaa ama in dhiig muslim buraashadaha lagu shubtaa sidaan horey u xusneyba waa arin dhanka soomaalida ka ah mid Ilaahay loogu dhawaado, sida asxaabihii safka hore ee salaada ugu kala hormari jireen iyaga oo ajar dheerad ah ka raadinaya. Waxaa taas markhaati u ah in ay dhahaan:
”Doofaarka ficil la’aan baa loo cadaabaa.”
Maahmaahdaas oo ay u daliishadaan in haddii aadan qabiilkaaga u ficiloon uu Ilaahay naartiisa kugu tuurayo.”
Haddadba soomaalida oo rabta in arjarkii iyo xasanaadkii u sii bato ayaa tilaabo horey u qaaday, taas oo ahayd in xasuuqa loo geysto qabiilada kale lagu daro carruurta, haweenka iyo ragga waayeelkaa. Waxaa kale qoomiyadu bilowday in kufsiga aad loo badiyo iyaga oo gaarsiiyey heer lagu fuliyo xataa kuwa ciirsada masaajida, laakiin arinkaan way og yihiin in uu cadaab u soo jiidayo, waxayse dhahaan:
”Rag ciil cadaab ka doorey”
Taas oo ay uga gol leeyihiin in kufsiga gabdhahooda ciilka iyo xanaaqa isaga qaboojiyaan. Markii Daniel Arab Moi la cinqilaabay ayey kiinyaankii waxay kufsi ugu dhaqaaqeen gabdhahii wadanka kolkaas ayaa nin sargaal ah waxuu yiri:
“Hablaha aad kufsanaysaan awalba ma idin xaqirsaneyn”
Kolka colaada indho-ku-garaadlayaasho arkaan socotaa kaliya ma dhacaan dilka iyo macsiyaadka kale, ee waxaa xataa marmar badan oo dadka badankiisu in barwaaqo lagu jiro moodaan si dadban loogu fuliyaa arimahaas foosha xun.Waayihii hore waxay soomaalidu taqaaney dagaal cad oo ay warmahooda soo gurtaan, laakiin sidii gumeystuhu u baray siyaasada guracan iyo laaluushka waxaa ummadii loo laayey hal qalable, waxii kalana haadaa loo waray.
Iskuuladii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre raggii iyo dumarkii uu jeclaa ugu magac daray si uu mustawahooda kor ugu soo qaado, kuwii iyaga ka toolmoonaana ugu qariyo, ayaa gabi ahaanba waxaa ka socdey dagaal maskaxda iyo jirka isugu dhafnaa oo lagu hayay carruurta soomaaliyeed, laakiin waxii sanadihii danbe soo baxay kolkii la arkey ayaa kacaankii Siyaad Barre watey oo soomaalida ku noqday sunta loo yaqaan saddex saamoodley bili u caano shubatay. Dugsiyadaas oo aan awalba qaneecada lagu qabin ayaa mid ka mid ah waxaa ka dhacay xasuuqii ugu xumaa ee soo maray taariikhda soomaalida gumaadkaas oo loogu magac daray:
“Xasuuqii dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali.”
Markii uu soo afjarmay dagaalkii u dhexeeyey kooxihii aan hadafka siyaasadeed la hayn iyo kacaankii soomaalida haadaanta ka tuuray ayaa waxaa dalka in Soomaaliya la dhibaateeyo u uuman ee Jabuuti soo abaabulley shirqool ka horeeyey kii lagu hoobtay ee Carta. Arinkaas oo ahaa in kooxihii bililiqada lagu magacaabo dawlad, taas oo looga jeedey in Soomaaliya xididda loo siibo. Xassan Guulleed Abtidoon oo aad uga fakarey siduu ugu guuleysan lahaa mijoxaabadaas uu u maleegey Soomaaliya ayaa madaxweyne u soo magacaabay Cali Mahdi Maxamed. Kolkaas ayaa Cali haddiiba Xamar ka soo dagey isaga oo ay u qorsheysan tahay in uu fuliyo barnaamijkii lagula soo balamay. Nasiibdarose Cali Mahdi waxuu Mogadishu ugu yimid taageerayaashiisii oo aad u caraysan. Raaciyayaashaas soo hor dhoobtay ayaa ahaa dad badan oo soomaali ah, oo ka cabanayey in laga qadiyey guryihii kacaanka laga dhaxlay iyo kuwii ay soomaalida kale ka guureen, ayna ka mid yihiin dadkii u soo halgamey in kacaanka laga xoreeyo Xamar. Shacabkaas dulmiga ka banaan baxayey waxay Cali Mahdi ku dhaheen:
“Jaalle Madaxweyne intii aannu jihaadka kula jirney kacaankii ayaan hungo ku soo dhacnay, oo waxaa na dhabar jabiyey mujaahidiintii kale oo dhamaan waxii hanti la helay dhabarka marsaday, kolkii aan dagaalkii ka soo noqoneyna waxaan xataa meel aan ciriirsano ka wayney wasaaradihii, isbitaaladii, iskuuladii iyo dhamaan dhismayaashii kale ee qaranka.”
Si deg deg ah ay shir u galeen Mahdi iyo taageerayaashiisii,
wadatashigaas oo looga wada xaajoonayey dulmiga ay tabanayeen shacabku. Intii shirka lagu dhex jirey ayaa waxaa la soo gaarsiiyey dhambaal xanbaarsanaa in dhamaan magaalada uusan hoy dadka dagen laga rari karaa ka banaaneyn aan ka ahayn dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali oo dagaan u ah carruur boqolaal gaareysa oo agoon ah iyo hooyooyinkood.
Shirkaas ayaa aad looga dooday sidii laga yeeli ahaa haweenka iyo carruurta nafta kala galay labadii kooxood ee hadafka gaabnaa. Waxaa dooda sii adkeeyey in carruurta aabbeyaashood intii aan la xasuuqin ka hor lagu tuhun sanaa in ay ruqa qaadayeen kacaankii quluushay iyo in kale.
Saacada badan ayaa doodii la isku mari waayey, laakiin waxaa ugu danbeyntii la isku afgartay in la midiraaciyo carruurtaas iyo haweenkii dhalay, iyada oo loo cuskaday daldalaadooda qodobo ay ka mid ahaayeen in waalidkood kacaanka saacidayeen, oo kolkaas uusan boos uga banaaneyn rugtii kacaanku ugu magac daray mudane Maxamuud Axmed Cali.
Cali Mahdi Maxamed waxuu dubaha ku dhuftay go’aankii ay isla meel dhigeen isaga iyo taageerayaashiisu oo ahaa in qoorta loo dheereeryo ilmahaas iyo hooyooyinkoodba. Shacabkii saacada ka hor u xanaaqsanaa hogaamiyahooda mudane Cali Mahdi Maxamed ayaa iyaga oo wajiyadooda farxadi ku dheehan tahay waxay galabtaas baangadahoodii ula carraabeen dhankii uu ka jirey dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali.
Subaxii danbe waxaa bogaga hore ee joornaalada adduunka ugu caansan sida News weekiga London ka soo baxa ku daabacnaa xasuuqaas ka dhacay rugtii waxbarashada ee Maxamuud Axmed Cali Ilaahay isaga iyo intii ku nafwaydey xaruntiisa ha u naxariistee. Joornaaladu waxay ciwaan uga dhigeen dhacdadaas naxdinta iyo anfariirka badnayd:
Massacre of Gaalgalle Children=
Xasuuqii Carruurtii Gaalgalaha.
QORAALKII HORE EE ALI SHIRE.... GUJI